रातारात समाजवादी र राजपाबीच एकता, नयाँ पार्टीको नाम ‘जनता समाजवादी’ – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/रातारात समाजवादी र राजपाबीच एकता, नयाँ पार्टीको नाम ‘जनता समाजवादी’
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच बुधबार रातारात पार्टी एकीकरण घोषणा भएको छ। उनीहरुले दिनभर पार्टी एकताका बिषयमा छलफल जारी राखेर बुधबार मध्यरात पौने १२ बजे पार्टी एकताको घोषणा गरेका हुन् ।
दुई पार्टी एकता भएपछि एकीकृत पार्टीको नाम ‘जनता समाजवादी’ राखिएको छ। एकीकृत पार्टीको झण्डा समाजवादी पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको झण्डा हुनेछ भने चुनाव चिन्ह छाता हुनेछ।
लामो समयदेखि एकीकरण प्रक्रियामा रहेको राजपा र समाजवादीबीच बुधबार राति सहमति भएको हो। पार्टीको वरीयता क्रममा महन्थ ठाकुरलाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ।
अहिले समाजवादीमा संघीय परिषदको अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छन् भने राजपामा ६ जना अध्यक्ष मण्डलका सदस्य छन् ।
पार्टी एकताको सहमती पत्रमा समाजवादीबाट डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठले तथा राजपाको तर्फबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र शरदसिंह भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दल विभाजनका लागि खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएपछि दुई दलले बुधबार राति नै एकता घोषणा गरेका हुन्। समाजवादी पार्टी फुटाउन सात सांसदले तयारी गरेपछि त्यसलाई रोक्न हतारमा समाजवादी र राजपाले एकता गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरे लगत्तै केहि दिनमा नै अन्य पार्टी फुटाएर आफ्नो पार्टीमा मिसाउने र केहि पार्टी टुक्रिएर नयाँ दल बन्ने देखेपछि आफुले त्यस्तो अध्यादेश ल्याएको जिकिर गरेका थिए ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुले नै प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको ब्यापक बिरोध गरेपछि ओलीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
रौतहटमा २ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
भारतको लागि दु,खद ख,बर : परमा,णु ब,म सहितको लडा,कू विमान भारतको सिमानामा तै,नाथ